DEG-DEG: Isku Aadka Wareegyada Siddeeda Iyo Afarta Ee Europe League Oo La Sameeyay - Yay Ku Beegmeen Man United & Inter Milan? - Gool24.Net
DEG-DEG: Isku Aadka Wareegyada Siddeeda Iyo Afarta Ee Europe League Oo La Sameeyay – Yay Ku Beegmeen Man United & Inter Milan?
Xidhiidhka kubadda cagta Yurub ee UEFA oo goor dhawayd sameeyay isku aadka wareegyada siddeeda iyo afar dhammaadka Champions League ayaa markale sameeyay isku aadka isla wareegyadaas ee tartanka Europe League.
Tartankan ayaa ah mid wareegiisa 16-ka aan wali si buuxda loogu kala bixin isla markaana kaliya min hal lug laga soo ciyaaray balse si lamid ah Champions League ayaa kooxaha soo bixi doona la isku sii aadinayaa.
Kooxaha waaweyn ee tartankan ku jira ayay hoggaanka u hayaan Manchester United oo England ka socota, Inter Milan iyo Roma oo Talyaaniga metelaya ayaa sidoo kale tartamayaal waaweyn ah, Bayer Leverkusen ayaa ah koox kale oo la xusi karo si lamid ah Sevilla.
Man United ayay u badan tahay inay wareega siddeed dhammaadka haatanba sii joogto maadaama oo ay wareegii hore 5-0 kaga soo adkaadeen kooxda LASK.
Aan ku bilawnee Man United iyo LASK midkooda soo baxa ayaa wareega siddeed dhammaadka ee tartankan la ciyaari doona kooxaha Copenhagen iyo Istanbul midkooda soo adkaada.
Dhinaca kale kooxaha Inter Milan iyo Getafe ayay midkooda soo adkaataa kulan la yeelan doontaa midka soo baxa Rangers iyo Leverkusen.
Kooxda kale ee Premier League ee Wolves iyo Olympiacos ayaa midkooda soo baxaa wajihi doonaa Sevilla iyo Roma midkooda soo adkaada.
Kooxaha Wolfsburg iyo Shakhtar ayuu midkooda wareega siddeed dhammaadka iska xaadiriyaa iyagana la kulmi doonaa midka soo baxa Basel iyo Frankfurt.
Man United/LASK vs Copenhagen/Istanbul
Getafe/Inter Milan vs Rangers/Leverkusen
Sevilla/Roma vs Wolves/Olympiacos
Wolfsburg/Shakhtar vs Basel/Frankfurt
Wareega Afar Dhammaadka
Midka soo baxa (Wolfsburg/Shakhtar vs Basel/Frankfurt) ayaa la ciyaari doona (Getafe/Inter Milan vs Rangers/Leverkusen)
Dhinaca kale midka soo adkaada (Man United/LASK vs Copenhagen/Istanbul) ayaa kulamo la yeelan doona Sevilla/Roma vs Wolves/Olympiacos)